ShweMinThar: မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့်၊ လျှောက်ထားခွင့်၊ ပျက်ပျယ်ခြင်း ဥပဒေအား လေ့လာကြည့်ခြင်း
Thank you. May I request it will be better if it is in English please? It is beneficial to media as well as Burmese and Arakanese.